Azia Atsimo Atsinanana: Lasa ny Didy Jadona, Mbola Mitoetra Kosa ny Fanivanana · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsimo Atsinanana: Lasa ny Didy Jadona, Mbola Mitoetra Kosa ny Fanivanana
Voadika ny 05 Oktobra 2013 0:30 GMT
Hetsi-panoherana ny lalàna mandrara ny faniratsirana ny mpanjaka any Tailandy. Sary an'i Matthew Richards, Fizakàmanana @Demotix (12/10/2011)
Nanomboka ny taonjato faha-20 lasa teo, firenena maro ao Azia Atsimo Atsinanana no nifindra avy amin'ny didy jadon'ny miaramila sy fanjakana tsy voafidim-bahoaka nankany amin'ireo rafi-pitondrana nofidiam-bahoaka. Raha toa ka nitondra fanatsarana maro teo amin'ny lalànam-pirenena sy ny fahatokisana ny governemanta ireo tetezamita ireo, mbola mitoetra kosa ireo fomba tranainy sasany.
Mbola henjana ny sivana any amin'ireo firenena maro, na anatin'ny aterineto izany na tsia, amin'ny alalan'ny fampiasana ireo lalàna fanaovana didy jadona sy ny fampanarahan-dalàna henjana ny media. Niampanga hatrany ho fitaovana enti-mamoritra any Vietnam, Tailandy, Filipina, ary Birmania ireo lalàna sy fampanarahan-dalàna sasany mampiady hevitra ireo vondron'ny mpanao gazety.
Vietnam: Tsindry hazolena faobe atao an'ireo mpitoraka bilaogy ara-politika
Mpitoraka bilaogy momba ny politika dimy amby telopolo ankehitriny no migadra any Vietnam. Nanazava ny filàna maika ny fanavaozan-dalàna izay mifehy ny fitenenana sy ny zavatra avoaka ao anaty Aterineto ny fanohizana ny fisamborana an'ireo mpitoraka bilaogy sy mpanohitra any Vietnam.
Matetika dia ampiasaina hitanana ireo olon-tsotra manohitra ny governemanta ny andinin-dalàna faha-8 ao anatin'ny Lalàna momba ny Heloka bevava, izay mandrara ny fampielezan-kevitra mamely ny fanjakana. Ny andinin-dalàna faha-258 ao amin'ny Heloka bevava dia manome sazy ny tsy fampiasana araka ny tokony ho izy ny “fahalalahana ara-demôkratika mba hamelezana ny tombotsoam-panjakana sy ireo zo fototra ary ny tombotsoanà vondron'olona na ny olona tsirairay” ary mety hidirana am-ponja mandritra ny fito taona. Tamin'ny herintaona, namoaka lalàna hanakatonana ireo bilaogy “maneho fanoherana” ny Praiminisitra ao amin'ny firenena. Amin'ny ankapobeny, ny fanjavozavoan'ny singa hita anatin'io lalàna io dia manome alàlana an'ireo manampahefana hanao fisamborana fahatàny miaraka aminà rafitra bitika hilavoana lefona.
Tamin'ny voalohandohan'ity volana ity, nampiharina ny didim-pitondrana laharana 72, lalàna iray izay nosoritan'ireo mafana fo maro ho fanafihana ara-pitsarana lehibe indrindra nataon'ny firenena manohitra ny fahalalahan'ny fampahalalam-baovao. Mandrara ny fizarana ireo tantara ara-baovao na ireo antsoina hoe “fampahalalam-baovao navondrona hitambatambatra” io didy vaovao io. Nefa ny governemanta dia milaza fa natao izany mba hiarovana ny fizaka-manana ara-tsaina irery ihany.
Matetika ny rafitry ny “karatra fanaovan-gazety” dia ampiasaina hifehezana ny media tranainy. Manazava lalina kokoa i Pham Doan Trang, mpanao gazety taloha :
Tsy misy karatra, tsy mahazo miditra. Rehefa tsy misy karatra, tsy afaka manantena hihaona amin'ireo olona mitàna toerana ambony ao amin'ny fitondrana ireo mpitati-baovao, na mitsidika olom-pantatra anatin'ireo biraom-panjakana, na ihany koa mandrakotra ireo fihaonamben'ny fanjakana.
Tsy mila mamono ireo mpanao gazety ny Fanjakana raha te-hifehy ny media satria na inona na inona, tsy manana fahafahana hanao asa mendrika ny hamonoana azy ireo ny mpanao gazety mitondra karatra ao Vietnam.
Tailandy: Tsiratsirao ny Mpanjaka, raha te-hahita fonja
Ny fameperana malaza indrindra ny media ao Tailandy dia hita anatin'ny andinin-dalàna faha-112 sokajy Heloka bevava, fantatra amin'ny hoe lalàna faniratsirana ny mpanjaka, izay mandrara ny tsirairay tsy haniratsira ny mpanjaka sy ireo ao anatin'ny fianakavian'ny mpanjaka.
Soritsoritan'ireo mpitsikera maro ho iray amin'ireo lalàna “henjana” indrindra eran-tany amin'ny resaka fitenenana izany satria fara-fahakeliny dia telo taona an-tranomaizina ary fara-fahabetsany kosa dia 15 taona ny sazy apetrany ho anà heloka iray monja. Matetika dia voaresaka eo amin'ny fanivanana ny votoaty anaty Aterineto sy ny fanakatonana vohikala io lalàna io. Ankoatra ireo manam-pahaizana amin'ny aterineto sy ireo tonia, dia misy ihany koa ireo olon-tsotra nogadraina noho ny fandefasan'izy ireo hafatra simaiso maniratsira ny fianakavian'ny mpanjaka.
Nangataka ny tokony hanovàna io lalàna io ireo manam-pahaizana mpikaroka momba ny lalàna avy ao amin'ny Anjerimanontolon'i Thammasat:
…tafiditra anatin'io fehezan-dalàna io avokoa na ireo tsikera, fanehoan-kevitra na koa fanehoana fanambaràna izay natao tamim-pahendrena sy mba hihazonana ny rafitry ny Lalàm-panorenana ary ny rafitra demôkratikan'ny governemanta.
Filipina: Mibahan-toerana lehibe ny horohoron'ny vesatra momba ny fanalàm-baraka
Any Filipina, mametraka fandrahonana mivantana sy ankolaka ho an'ny fahalalahana miteny io lalàna manohitra ny heloka ao anaty aterineto io , fa ny lalàna mikasika ny fanalam-baraka no mety ho fandrahonana ratsy indrindra ho an'ny fahalalahana miteny ao amin'ny firenena.
Eo ambanin'ilay Lalàna Famaizana efa 83 taona nasiam-panavaozana ao amin'ny firenena, ny fanalam-baraka dia heloka bevava izay mampiditra an-tranomaizina mandritra ny enim-bolana sy/na onitra mitentina 200 ka hatramin'ny 6.000 pesos (eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 140 dolara Amerikana eo ho eo). Nefa matetika dia mbola avo kokoa noho izany ny onitra aloan'ireo voasambotra. Nanamarika ny mpanao gazety zokiny Luis Teodoro fa “natao hanafoanana ny fahalalahana miteny ny tena tanjon'io lalàna manohitra ny fanalam-baraka io raha tokony hiady amin'ny fanararaotan'ny media.”
Ho fomba iray hafa entina miampanga ny fanalam-baraka ao amin'ny firenena, nanome sosokevitra ireo mpisolovava ny media ny tokony hanaovana hetsi-panentanana midadasika ho fampianarana ny mediam-bahoaka sy ny fanaovàna fifehezan-tena manokana mba hizahana sy hiampangana ireo fanararaotan'ny media.
Singapore: Fahazoan-dàlana ho an'ny media sy sivana mibaribary
Tsy ela ny niampangan’ireo mpampiasa aterineto ilay lalàna fanomezan-dàlana vaovao nataon'i Singapore ho an'ireo vohikala mitati-baovao ho toy ny fepetra fanivanana. Eo ambanin'io lalàna vaovao io, tsy maintsy manana fahazoan-dàlana sy mamoaka “antoka fandehanana” 50.000 dolara Amerikana ireo vohikala vaovao mitatitra momba an'i Singapore ka manana IP tokana mpijery miisa 50.000 isam-bolana.
Mametraka fehy entitra ihany koa ny governemanta eo amin'ny media tranainy. Taorian'ny niasàny nandritra ny telo taona ho mpamerina mamoaka lahatsoratra tanatinà gazety iray malaza ao Singapore, mampiseho ny hamafin'ny fanivanana ao amin'ny firenena i Mark Fenn:
Miseho amin'ny endriny mibaribary na amin'ny fomba miafina kokoa ny fifehezana ny fanaovan-gazety an-tsoratra. Hita eny rehetra eny, kosa, ny fanivànan-tena.
…tsy vaovao ho an'ireo mpitatitra ny manova ny tantaran'izy ho aminà lenta tena ambany tokoa noho ny fitakian'ny “mpanolotra” na ny governemanta hanova ny teny iray voalaza anaty fitanisàna na ny lohateny vaventy.
Birmania: Mbola miziriziry hatrany ny lovan'ny fanivanana
Any Birmania, maro ireo fanovana momba ny media no natao tanatin'ireo taona vitsy lasa, tahaka ny fandravana ny biraon'ny sivana, saingy mbola tsapa mivantana na ankolaka ny tarazon'ireo fiantraikan'ny fanivanana maharitra. Mitohy miatrika ireo sazy noho ny fanalam-baraka sy fanenjehana mafy hafa ireo mpanao gazety mahery fiteny. Voampanga ho misakana an-tsitrapo ny fivoaran'ny fidirana Aterineto ao amin'ny firenena ihany koa ny governemanta, anatinà ezaka hifehezany ny tsy hiparitahan'ny fampahalalam-baovao saropady.
Manamarina ny toe-javatra misy eo amin'ny media anatin'ireo firenena ao Azia Atsimo Atsinanana ireo fa tsy voatery ho azo adika ho fahalalahan'ny media tsara kokoa ny fanavaozana ara-politika sy ara-toekarena. Tokony hazonina ho tompon'andraikitra amin'ny fihetsiny ireo mpanao lalàna izay manohy mitahiry sy manandratra politika tranainy ka manohitohina ny fahalalahana miteny.